Horyaalka 31-aad ee ciyaaraha Fudud oo lasoo gebagabeeyay +Sawirro.
Monday October 26, 2015 - 23:17:14 in Xiriirka Ciyaaraha Fudud by Nocsom Editor
Waxaa shalay garonka Banaadir lagu soo gebagabeeyay horyaalki 31 -aad ee ciyaaraha Fudud oo muddo shan maalin ah socday ,waxaana xafaladii xeritaanka kasoo qeyb galay masuuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo isboortiga , Guddiga Olombikada
Waxaa shalay garonka Banaadir lagu soo gebagabeeyay horyaalki 31 -aad ee ciyaaraha Fudud oo muddo shan maalin ah socday ,waxaana xafaladii xeritaanka kasoo qeyb galay masuuliyiin ka socotay Wasaaradda Dhalinyarada iyo isboortiga , Guddiga Olombikada Soomaaliyeed . Madaxda Xiriirka kubada Kolagya Masuuliyiinta xiriirka cayarahaa Fudud iyo marti sharaf kale.
Horyaalka oo bilowday 18 bishan ayaa waxaa ka qeyb galay 200 ciyaaryahan oo matala 8 koox oo isugu jira Wiilal iyo Gabdho, waxaana lagu tartamay orodada qaybaha kale gedisan iyo boodada hoose.
Kooxaha Horseed iyo Heegan ayaa tartanak ka dhigay wacdarihii ugu xooganaa waxayna soo bandhigheen ciyaaro xafiltan kujiro iyo dagaal ugu galay siddii aykoox waliba ku noqn lahayd horyaalka cayaaraha fudud ee dalka.
Kadiib shan maalin oo la isku xiiqay waxaa dhanka Wiilasha kalinta koowad ka galay tartanka kooxda Horseed, oo keennsatay dhibicii ugu badnaa kaalinta labaad Heegan, kaalinta seddexaad kooxda Iimaan Hospital.
sidoo kale waxaa loolan ciyareed aad u quruxb badan galay dhnak gabdha oo sandkan ka duwan sanidii lasoo dhaafay xaga badnhiga iyo tirada ciyaartoyda oo soo kordhaysa waxaana sandkan kaalinta koowaad galay kooxda Iimaan Hospital ,kaalinta labaad Heegan iyo kaalinta seddexaad oo ay soo ciriirsatay kooxda Barwaaqo.
Dhamman masuuliyiintii kasoo qayb gashay xaflada ee goobta ka hadlay aya isku raacay in sanadkan horyaal;ka cayaraha fudu u aad uga wanaagsana sanadihii lasoo dhaafay taasna ay tahay dadaalka muu xiriirka ciyaaraha fudud ugu jiro horumarinta cayaraha Fudud sidii uu guulo uga soo hoyn lahaa tartamada caalami uu ka qayb galo.
Waaxsa Warfaafnta Gos